gmail မေးခွန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » gmail မေးခွန်း
Posted by naywoon ni on Dec 24, 2010 in Computers & Technology, Know-How, DIY | 13 comments
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးရက်လောက်ကဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော့ဘေးမှာ ထိုင်နေတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက် ဂျီမေးလ်ဖွင့်ထားရင်းကနေ ပိတ်သွားပြီး ပြန်ဖွင့်လို့ မရတော့တာပါ။ ကျွန်တော်လည်း လုပ်တတ်သလောက်လုပ်ကြည့်တာပဲ မရဘူး ။ ဖြစ်နိုင်တာတွေကိုပြောပြပါ့မယ်။ ကျွန်တော်တွေးကြည့်တာတွေလေ…..။
ဂျီမေးလ် ကပိတ်သွားပေမဲ့ ဂျီတော့ကတော့ ပွင့်လျှက်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကကောင့်က ဘယ်သူလုပ်ပေးတာလဲ မေးကြည့်တော့ ဒီဆိုင်ကပဲ လုပ်ပေးတာပဲတဲ့။ ကျွန်တော်လည်း ဂိုဂဲလ်ကနေမေးလ်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့ အကောင့်ရိုက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ Can’t access your account? ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ အရင်တစ်ခါကျွန်တော့အကောင့် အဲဒိလိုဖြစ်ပြီးပိတ်သွားတုန်းကရယ် နောက်ထပ်နှစ်ခါ သူများအကောင့် ဖွင့်မရဖြစ်နေတုန်းကရယ် သုံးကြိမ်လုပ်ဖူးနေတော့ ရမယ်ပဲထင်လို့ပါ ။ အဲဒိလိုဖွင့်လိုက်ရင် ပထမဆုံး အကောင့်ကိုပြန်တောင်းပါတယ်။ နောက်သူရေးပေးထားတဲ့ စာလုံးတွေ မှန်အောင်ပြန်ရိုက်ပေးရတာပါ။ နောက်တစ်ခါကျတော့ ပြန်ဆက်သွယ်ရမဲ့မေးလ်တောင်းပြီး မေးတာတွေဖြည့်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ The account you entered is disabled. [?] လို့ပေါ်လာပါတယ်။ ဘေးက [?]ကိုဖွင့်ကြည့်တော့ Google Accounts: I’m gettingamessage that says ‘Sorry, your account has been disabled.’ လို့ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ? ကျွန်တော်လည်း ဆက်မလုပ်တတ်တော့လို့ပါ။
ဒီလို ဖြစ်ကြဖူးလား? အကောင့်လုပ်ထားတာက oct 18 ကမှပါ ။သူ့အကောင့်ထဲမှာ ဘယ်သူမှတောင်မရှိသေးဘူး။ ဘာမှလည်းမလုပ်တတ်လို့ မလုပ်ရသေးဘူး။ ကျွန်တော်စပ်ဆော့တာနဲ့ ဂဇက်တက်ထဲပဲ ၀င်ကြည့်ရသေးတယ်။ ဒီမြို့မှာက (ဒီဆိုင်မှာပေါ့လေ)အကောင့်အသစ်တွေကို လုပ်ပေးပါတယ်။ အစကတော့ဒီမှာပဲ ကိုယ်တိုင်လုပ်တာပေါ့။ နောက်ကျတော့ ဒီက လုပ်လို့မလွယ်တာနဲ့ နိုင်ငံအပြင်ဘက်ရောက်နေတဲ့ အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ လုပ်ပေးပါတယ်။ ဟိုကလုပ်လိုက်တဲ့ လိုကေးရှင်းနဲ့ သုံးနေတဲ့ နေရာ မတူတာကြောင့် ဖြစ်သွားတာလား? လို့တွေးနေမိတာပါ။ အဲဒါဆို ဒီလိုပဲ လုပ်ထားတဲကအကောင့် တွေကဆက်သုံးလို့ရနေသေးတယ်။ သူအကောင့်လေးက maythirihtun.2011@ ပါတဲ့ ။ ဂဇက်တက်ယူဇာနိမ်းကတော့ ဖြူနှင်း.2011ပါတဲ့။ password ကတော့မေးထဲပါသွားပြီ။ အသစ်ပြန်ဝင်ရမလိုဖြစ်နေတယ်။ ခင်ဗျားတို့ကောအဲဒိလိုဖြစ်ဖူးကြသလား? ပြန်တောင်းလို့ကောရသလား? အသစ်ပဲလုပ်လိုက်ရတော့မလား ? ……စားကြည့်ကြပါဦး။
ကျွန်တော်လည်းမေးစရာတစ်ခုရှိလို့ကဗျာဆရာကြီးနဲ့ ရောချခွင့်ပြုပါဗျို့ 
အခုဒီဆိုက်မှာ ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ michaelaungpu@hotmail.com လိပ်စာကို မန်ဘာဝင်ပြီးကတည်းက
တစ်ခါမှ ဖွင့်မကြည့်ဖူးဘူးဗျ ဖွင့်လို့ လဲမတတ်တော့ဘူး password ကို မမှတ်မိတော့ဘူး
ဂေဇက်ထဲ ဝင်တဲ့ password တောင် ကံကောင်းလို့ မှတ်မိနေတာ
အဲ့သည်အခါကြတော့ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့် mail ထဲမှာ ဘာတွေရှိနေလဲ ဘယ်သူတွေ ဆဲထားလည်း မေတ္တာပို့ ထားလဲဆိုတာ
ဖွင့်ကြည့်လို့ မရဖြစ်နေလို့ ပါ ခုတစ်လော ဘာအရူးပိုထလာလဲမသိဘူး ဒီလိပ်စာကို တော်တော်ဖွင့်ကြည့်ချင်နေတယ်
ဘဝနာပွားခြင်ရင်တော့ michaeljonnyaungpu@hotmail.com ကို မေတ္တာဓာတ်တွေလွှတ်ကြပါဗျို့ 
ဂျီမေးလ်က ..အကောင့်သစ်လုပ်၇င်.. အသုံးပြုနေတဲ့ အက်တစ်ဗ်အီးမေးလ်တခုတောင်းတတ်ပါတယ်..။ အခုတော့ ..
ပါတ်စ်ဝပ်ပျောက်ရင်..မေ့ရင်.. ခဏခဏမှားဝင်လို့ ..လော့ခ်လုပ်ခံရရင်… သူများက..ပတ်စ်ဝပ်ပြောင်းလိုက်ရင်..စတာတွေအတွက်..လိုအပ်တဲ့ ပတ်စ်ဝပ်တခုကို.. အကောင့်ဖွင့်တုံးက ..မူရင်းအိးမေးလ်ဆီ ပြန်ပို့ ထားတတ်ပါတယ်..။
အဲဒါတောင် မမှတ်မိဘူးဆိုရင်တော့… ဆာယိုနာရ လုပ်ပေတော့..။
အခုတလော အကောင့်တွေ lock ကျနေတာ ဒီမှာပဲဖြစ်တာမှတ်နေတာ အခုမှပဲအားရှိသွားတော့တယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတော့မသိပါဘူး။ အခု နောက်မှ လုပ်တဲ့ အကောင့်တော်တော်များများ အဲ့လိုဖြစ်နေတာ။ ပြန်ဝင်တဲ့နည်းလေး ရှိရင်မျှဝေပေးကြပါဦးလို့ ရောပြီး အကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်
ကြည့်ရတာ.. ဂျီမေးလ်အပါအ၀င် ဂိုဂယ်ဆားဗစ်အကုန်လုံး အကြီးစားပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတယ်..။
နောင်နှစ်ထဲထွက်လာတော့မယ်… Google Chrome OS အတွက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်..။
ကွန်ပျူတာတွေ ခေတ်ပြောင်းတော့မယ် …ယူဆမိပါတယ်..။
ပြန်ဝင်ချင်ရင် .. အဲဒီအကောင့်လုပ်တုန်းက .. သုံးခဲ့တဲ့ အီးမေးလ်အဟောင်းကို သိမှ ရပါမယ်..။
မြန်မာမှာက ဂျီမေးလ်အကောင့်ကို အသစ်လုပ်ဖို့ခက်သွားပါပြီ။ အဟောင်းပြန်ဝင်ရင်လည်း မ၀င်တာကြာရင် ၀င်လိုက်တာနဲ့ နှစ်ခုလာမေးတာရှိသလို တစ်ခုပဲ လာပြောတာရှိပါတယ်။ နှစ်ခုက ဖုန်းနဲ့တွဲသုံးမှာလား ဒါမှမဟုတ်နောက်မှ ချိတ်မှာလို့ပြောလိုက်ရင်တော့ အကောင့်ထဲတန်းရောက်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကြာနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အသစ်လုပ်ပြီး ၀င်မကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၀င်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အပေါ် မေးခွန်းက ပြသာနာကတော့ တစ်ခုတလေ သုံးတဲ့စက်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့အလေ့အထတစ်ခုပါ။ စက်ပြောင်းသုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မေ့သွားတဲ့ပတ်စဝေါ့ကို ပြန်ဖော်တယ်ဆိုရင် ဖြည့်ထားတုန်းက ဒုတိယအီးမေးလ်ဆိုတာရယ် ဖြေထားတဲ့မေးခွန်းရယ် သိဖို့လိုပါတယ်။ မသိခဲ့ရင်လည်း ပြန်ဖော်ယူလို့ရပါတယ်။ ဒါကတော့ ဒီမှာပြောလို့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။
အကောင့်လုပ်တုန်းက မေးလ်တောင်းတဲ့အဆင့်အထိကို မရောက်တာကိုခိုင်ရေ
ကျွန်တော့အကောင့်အသစ်နှစ်ခု ကလည်းဖွင့်မရတော့ဘူး အဲဒါက ကိုယ်တိုင်လုပ်တာ လုံခြုရေး မေးခွန်းလည်း ဖြေထားတာမှတ်မိတယ် password မေ့နေသလားဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင် အရင်က လုံခြုံရေးမေးခွန်းပြန်ဖြည့်ရတယ် အခုအဲဒိလိုပေါ်မလာတော့ပြန်ဘူး ။
အဲလိုပေါ်မလာတော့ ဘယ်လိုတွေ ထပ်ပေါ်လာလဲ ဖော်ဂတ်ပတ်စဝေါ့ကို နှိပ်လိုက်တာလား….
ဂိုဂဲလ်ကနေမေးလ်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့ အကောင့်ရိုက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ Can’t access your account? ကိုဖွင့်လိုက်တာပါ ဖော်ဂတ်ပတ်စဝေါ့ ကိုနှပ်ရင် ဆာကျူရတီ မေးခွန်း ပြန်တောင်တတ်လို့ပါ။ The account you entered is disabled. [?] လို့ပေါ်လာပါတယ်။ ဘေးက [?]ကိုဖွင့်ကြည့်တော့ Google Accounts: I’m gettingamessage that says ‘Sorry, your account has been disabled.’ လို့ပေါ်လာပါတယ်။
ကျနော်ထင်တာကတော့ မြန်မာဖောင့်နဲ့ ပစ်စ်ဝပ်တွေကို သွားသွားရိုက်မိတာကြောင့်လို့တော့ထင်မိပါတယ်။
ပါတ်စ်ဝပ်မှားနေတယ်ပြောလဲ ထပ်ထပ်ရိုက်တော့ စက်က သူ့ကိုခိုင်းတာကိုနားမလယ်တော့ လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ထင်တာပြောတာနော် သေချာပေါက်သိလို့ပြောတာ မဟုတ်ဘူး
မဆီမဆိုင်ဖြစ်နေရင်လည်း သီးခံပြီးဖြေပေးကြပါ။ ကျွန်တော်က အကောင့် လေးခု သုံးပါတယ်။ အကောင့်တွေမှာ username နဲ့ password ကို ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့ နာမည်သုံးပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ တေးရေးဆရာနာမည်နဲ့ အဆိုတော်။ ပြီးတော့ ဇာတ်ကောင်နာမည်နဲ့ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး စာရေးဆရာနာမည်တွေ သုံးပါတယ်။ ဒါမှ ကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်။ မဟုတ်ရင်မေ့သွားရော။ အဲဒီလိုသုံးတာဟာ ဟိုနာမည်ကြီးလူတွေအတွက် ထိခိုက်မှုဖြစ်လာနိုင်ပါသလား။
ပါတ့်စ်ဝပ်က … ဂိုဂယ်က အမည်ကိုသိမ်းတာမှာ .. စာလုံးအနေနဲ့သိမ်းတာမဟုတ်တာမို့ .. သိစရာအကြောင်းမရှိပါ..။
ယူဆာနိမ်းကတော့ … သူများနာမယ်ဆိုရင် ကောင်းပါဘူး..။ တချို့ အီးမေးလ်မှားပို့ တတ်တာမို့ ပါ..။
ကိုယ်တိုင်အတွက်လည်း မကောင်းပါဘူး..။ ယူအက်စ်မှာဆိုပါတော့ .. အလုပ်သွားလျှောက်လျှောက်… ဆာဗေးဖြည့်ဖြည့်.. ကိုယ့်နာမယ်မဟုတ်တဲ့ အီးမေလ်းကြီးဆို .. အပြီးစိတ်ချပြီးတော့ ယုံမယ်မထင်ပါ..။
နာမယ်ကြီးလူက ..သူ့နာမယ်သူများယူသုံးထားတာမို့ … သူတို့စိတ်ထဲလည်း ကောင်းမယ် မထင်မိပါခင်ဗျ..။
ဖြစ်ဆို ကျုပ်တောင် ခဏခဏ ဖြစ်တာကိုးဗျ..။
ခုလိုဖြေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါခင်ဗျား။ နောင်ဆို ဆင်ခြင်ပါ့မယ်။
အဲဒါက ခဏခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်.. အခုနောက်ပိုင်းအကောင့်တွေ အဖြစ်များပါတယ် သူက အကောင့်ကို verfication လုပ်ခိုင်းတဲ့သဘောပါ တခါတလေကျရင် code တောင်းပါတယ်… ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ထည့်ပေးရပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံက ဖုန်းနံပါတ်တွေဆိုရင် လက်မခံပါဘူး အဲဒိ ဖုန်းနံပါတ်ထဲကို ကုဒ်ထည့်ပေးပါတယ် အဲဒီကုဒ်ကို ယူပြီးတော့ ပြန်ထည့်လိုက်ရင်ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်….. disbel ဖြစ်သွားရင်တော့ ပြန်ရဖို့ မလွယ်ပါဘူး ယူဇာနိမ်း ပြန်တောင်းတာတောင် မချပေးတော့ပါဘူး ကျွန်တော့် အထင်တော့ သူတို့ဘက်က ယာယီပဲချပေးတဲ့အကောင့်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်…အဲဒါကို verfine မလုပ်လို့ပျက်သွားတယ် ထင်တာပဲ … နောက်ပြီးတော့ အကောင့်ဖွင့်ရင် secondry email ထည့်ပေးရပါတယ် ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင် ကိုယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ အကောင့်သစ်အတွက် ကုဒ်ကို secondry email ထဲကို ပို့လိုက်ပါတယ်.. အဲဒီကုဒ်ကို ဘယ်လိုထည့်ရမယ်ဆိုတာတော့ ရှာလို့ မတွေ့သေးပါဘူး … သိတဲ့သူများလဲ ကူညီပေးကြပါ…………….. အကောင့်တစ်ခုဖွင့်တော့မယ် ဆိုရင် secondry email ထည့်ပေးလိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်…. အခုနကလို disbel ဖြစ်သွားတာကတော့ ကျွန်တော် ပြန်တောင်းဖူးတယ် username တောင် ပြန်မချပေးဘူးဖြစ်နေတယ် …. လုံးလုံးပျက်သွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်…… အခုနောက်ပိုင်းဖွင့်တဲ့ အကောင့်တွေအဖြစ်များပါတယ်… ဘယ်ကဖွင့်တဲ့ အကောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အခန့်မသင့်ရင် ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်……. ကျွန်တော်လဲ ခဏခဏကြုံဖူးပါတယ်.. အခုထိတော့ သေသေချာချာမသိသေးပါဘူ…….. သိသူများ ရှိရင်လဲ ကူညီပေးကြပါ……….
ကိုမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပ ပြောတဲ့ Hotmail ဆိုတာ သူ့ကို ဖွင့်တော့မယ် ဆိုရင် gmail ဖွင့်တုန်းကလို secondry email ပုံစံ email ဖြည့်ရပါတယ်……. အဲဒီမေးလ်ကို သိတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီမေးလ်နဲ့အတူ Password ပြန်တောင်းကြည့်ပါလား……. ရနိုင်လောက်မယ် ထင်ပါတယ်………..စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့……………….အဆင်ပြေပါစေဗျာ……
* မှားတာရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါ သိသလောက်လေးကိုပဲ ဝင်ပြောကြည့်တာပါ……….